Ihe ị ga-ahụ na obodo German nke Bremen | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ na Bremen
La mara mma obodo nke Bremen nwere akụkọ ihe mere eme ochie obodo bụ nke UNESCO kwupụtara na ọ bụ World Heritage Site. Tinyere mpaghara ọdụ ụgbọ mmiri, obodo a dị n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ Germany bụ Obodo Hanseatic Free nke Bremen. Ugbua na narị afọ nke XNUMX a kpọtụrụ obodo a na ederede, ya mere ọ bụ obodo ochie ochie.
Anyị ga ahụ ihe nkuku nnukwu obodo German a na-enye anyị, nke osimiri Weser gafere na North Sea. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ otu n'ime obodo ndị ahụ na-enweghị oke mmadụ na nke nwere ọpụrụiche pụrụ iche nke anyị na-agaghị echefu.
1 Ugochukwu Nwankwo
2 Halllọ Nzukọ Obodo Bremen
3 Ihe akpụrụ akpụ nke Rolando
4 Katidral St. Peter na Bremen
5 Ihe eji egwu egwu Bremen Town
6 Chọọchị nke Nwanyị Anyị
7 Na-agafe na Bürgerpark
8 Okporo ụzọ Böttcherstrasse
9 Osimiri nke osimiri Weser
10 Gburugburu Schnoor
11 Ebe nkiri Kunsthalle
Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ otu n'ime ebe dị mkpa na Bremen obodo, Market Square. Ọ bụ n’ime ya ebe anyị hụrụ ụfọdụ n’ime ihe ndị kachasị mkpa n’obodo ahụ, dị ka Halllọ Nzukọ Obodo na ihe akpụrụ akpụ nke Rolando. Ọnọdụ dị na ogige a enweghị mgbagha ma ị nwere ike ịnụ ụtọ ijegharị na-ahụ ụlọ ndị mara mma. Ọ bụ ezie na a na-akpọ ya ahịa ahịa, a na-eme ahịa n'èzí n'ama ọzọ dị nso.
Halllọ Nzukọ Obodo Bremen
Halllọ nzukọ obodo nke obodo a bụ otu n'ime ihe ịtụnanya kachasị egwu. A ụlọ ụlọ gothic ochie nke mara mma nke di na etiti etiti anyi kwuru. Ọdịdị ya dị na usoro Renaissance, site na narị afọ nke XNUMX na n'ime ị nwere ike ịhụ nnukwu ụlọ Gothic nke a na-eme ihe omume dị mkpa n'obodo ahụ. O nwekwara okpuru ulo nke emere ka o buru ulo nri. Incrediblelọ a dị ịtụnanya bụ otu n’ime ihe mere e ji kpọsa obodo a ka ọ bụrụ Ihe Nketa Worldwa.
Ihe akpụrụ akpụ nke Rolando
La Ihe oyiyi Rolando bụ akara nke obodo ọ dịkwa n’ihu ụlọ nzukọ obodo ahụ. E debere ihe oyiyi a na nke mbụ ya na narị afọ nke XV mana n'ime osisi, na-emesịa dochie ya na nke anyị na-ahụ taa. Ihe akpụrụ akpụ a na-anọchite nnwere onwe na ikpe ziri ezi ma ekwuru na ọ bụrụhaala na ihe akpụrụ akpụ ahụ ga-abụ obodo nweere onwe ya.
Katidral St. Peter na Bremen
Katidral obodo ahụ sitere na chọọchị ozioma ma ọ bụ wuru na narị afọ nke XNUMX na ejiji gothic. Ọ bụ ụlọ mbụ, nke lanarịrị bọmbụ nke Agha Worldwa nke Abụọ. N'okpuru ala crypts kwụpụ na kwa ụlọ elu ndị ị nwere ike ịrị iji nwee nnukwu echiche banyere obodo ahụ.
Ihe eji egwu egwu Bremen Town
Ọ bụrụ na ị gụtụla akụkọ banyere ụmụnna ndị a ma ama GrimmNdị na-egwu egwu Bremen Town ga-ada ụda nke ọma. N'ime obodo a, ha emeela ihe oyiyi na-asọpụrụ akụkọ a, nke bụ ihe na-adọrọ mmasị maka ndị njem na ndị na-anụ akụkọ ụmụaka ndị a. Dị ka akụkọ si kwuo, ọ bụrụ na ị metụ ụkwụ ịnyịnya ibu aka ma chọọ ihe ọ chọrọ, ọ ga-emezu.
Chọọchị nke Nwanyị Anyị
Ọ bụrụ na ụlọ ụlọ okpukpe na-amasị gị, ị gaghị echefu ya Chọọchị nke Nwanyị Anyị. Buildinglọ a bụ otu n’ime ndị kacha ochie n’obodo ahụ, malite na narị afọ nke iri na otu. Igwe windo ya nwere ntụpọ dị ugbu a, dịka e wughachiri ha na afọ 70. -lọ ụlọ ndị Gothic ka na-echekwa ụfọdụ mgbidi mbụ nke uru ọrụ bara uru.
Na-agafe na Bürgerpark
Nke a dị ukwuu ogige bụ otu n'ime ndị na obodo nwere, ebe ọ bụ na n’obodo ndị dị na German, a na-akwanyekarị oghere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ije ije n'ogige a bụ nnukwu ọrụ iji zuru ike.
Okporo ụzọ Böttcherstrasse
Nke a bụ otu n'ime okporo ámá ndị a gara ọtụtụ nke obodo Bremen, nke jikọtara Square Market na mpaghara osimiri. Okporo ámá a jupụtara na ụlọ brik na-acha uhie uhie ma jupụta ụlọ ahịa. Ọ bụ ebe ị na-agafe agafe ebe ị ga - ahụ Carillon ama ama na Casa Roselius.
Osimiri nke osimiri Weser
Nke a bụ otu ebe kachasị ndụ na obodo niile na ebe -enwe ike ịnụ ụtọ oge kacha mma. N'ime ebe a enwere ụlọ nri na ụlọ mmanya iji kwụsị ma anyị nwekwara ike ịhụ ụfọdụ ụgbọ mmiri ebe enwere ụlọ nri. Na mpaghara a, a na-ahazi ahịa site n'oge ruo n'oge ma ọ nwere nnukwu ikuku.
Mgbe anyị gara Bremen, anyị agaghị agbaghara ndị nnọchi anya ya kachasị. Na Obodo Schnoor bụ otu n'ime ndị ochie na obodo ọ bụkwa ọmarịcha mpaghara bohemian. Ejiri ụlọ mara mma mara mma site na narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX. N'ime nnukwu agbata obi a, anyị nwere ike ịchọta obere ụlọ ahịa na ụlọ nri.
Ebe nkiri Kunsthalle
El Kunsthalle bụ ụlọ ọrụ ihe nka obodo, ụlọ ihe ngosi nka nke na-edebe ọtụtụ eserese ma bụrụkwa ebe a chọrọ iwu maka ndị hụrụ nka n'anya. Na gallery ahụ, ọrụ Flemish kamakwa ụfọdụ eserese ndị ọrụ dị mkpa dịka Monet, Van Gogh ma ọ bụ Manet sere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ na Bremen